हाम्रोगाईघाट . ब्लगस्पोट . कम: एक दलित युवकलाई डेढ महिनादेखि खोरमा
एक दलित युवकलाई डेढ महिनादेखि खोरमा
4:39 AM भुवन राउत
बेल्टार(उदयपुर) — मानसिक सन्तुलन गुमाएका जमासिंह अधिकारीलाई डेढदशकदेखि खोरमा थुनेको देखेर बेल्टार — ९ माडिवास भित्तेका एक दलित युवकलाईपनि उनको परिवारले डेढ महिना यता सुगुर जस्तै खोरमा थुनेका छन ।
९ बर्षयता मानसिक सन्तुलन गुमाएपछि उपचार गर्न नसक्दा पदमबहादुर परियारले २० बर्षीय छोरा झुमन परियारलाई डेढ महिना देखि खोरमा थुनेका हुन । सिद्धिपुर —४ वाइतुङका ३६ बर्षीय अधिकारीलाई उपचार गर्न नसक्दा उनको परिवारले डेढ दशक सुगुर जस्तै खोर थुनेका थिए । त्यस्तै आफूलेपनि उपचार गर्न नसकेकोले छोरालाई थुन्नु परेको झुमनका बुवा पदमबहादुरले वताए । उनले भने “उपचार गर्न नसक्दा जमानसिंहलाई खोरमा थुनेको भन्ने सुनेर हेर्न गए” । जमानसिंहलाई हेरेपछि खोरमा थुन्नु पर्ने रहेछ भन्दै आएर खोर बनाएका छोरालाई थुनेको उनले वताए ।
मानसिक सन्तुलन गुमाएपछि उपचार गर्न नसक्दा डेढ महिनादेखि खोरमा थुनिएका उदयपुरको बेल्टार — ९ का २० बर्षीय झुमन परियार ।
११ बर्ष उमेर हुदा“देखि मानसिक सन्तुलन गुमाएका झुमनले स्थानीय सर्वसाधरणलाई कुटपिट गर्ने, तोडफोड गर्ने र आफनै परिवारका सदस्यलाई कुटपिट गर्ने गरेको पदमबहादुरले वताए । परिवारका सदस्यालाईमात्रै होइन छिमेकीलाई समेत कुटपिट गर्न सुरु गरेपछि मारिदेला भनेर थुनेको उलने भने “औषधि उपचार गर्न आर्थीक अभाव छ” । त्यसैलेपनि विकल्पमा थुनेर राखेको उनले वताए । झुमनलाई १३ दिन धरान स्थित विपि कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपचार गरिएको थियो ।
तर आर्थीक अभावमा थप उपचार गर्न नसकिएको उनकी आमा धनकुमारी परियारले वताइन । उनले भनिन“मानसिक सन्तुलन गुमाएपछि आर्थीक अभावमा उपचार गर्न सकिएन” त्यसैले इलाका प्रहरी कार्यालयलाई बेल्टारलाई जानकारी गराए खोरमा थुनिएको उनले वताइन । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर गुजार गर्नु पर्ने र छोरालाई रुगेर बस्न नसक्दा परियार दम्पतीले छोरालाई थुन्न बाध्य भएको वताए ।
चार छोरा मध्ये जेठो छोराको सानै उमेर मृत्यु भएको झुमनकी आमा धनकुमारीले वताइन । झुमन माइलो छोरा हो उनले भनिन “जेठोको मृत्युपछि सवैभन्दा जेठो झुमनपनि मानसिक सन्तुलन गुमाएपछि विचल्लीमा परीयो”। ७/८ कठ्ठा जग्गामा गुजारा गर्नु पर्ने बाध्यता र उपचार गर्न आर्थीक अभावमा समस्या भएको उनले वताइन ।
झुमनलाई सुरुका ३ महिना बाधेर घरमै राखिएको र बाधेर राख्नपनि नसक्दा घर भन्दा करिब २ सय मिटरको दुरीमा खोर बनाएर राखिएको पदमबहादुरले वताए । खोर बनाउन समेत आर्थीक अभाव भएपछि छिमेकीको सहयोगमा खोर बनाएको उनले वताए । खोर बनाउन स्थानीयल श्रमदान गरेपनि १ हजार ५ सय रुपैया खर्चेको पदमबहादुरले वताए । उनले भने “खोर बनाउदा“को १ हजार ५ सय रुपैयापनि ऋण लागेको छ” । झुमनलाई सुगुर थुन्ने खोज जस्तै चारै तिर काठले घेरेको खोरमा थुनिएको छ ।
समाचार / तस्वीर — डिल्लीराम खतिवडा
No Response to "एक दलित युवकलाई डेढ महिनादेखि खोरमा"